Antonio Conte Oo Markii Labaad Maxkamad La Koraya Chelsea Inkastoo 9 Milyan Oo Magadhow Ah La Siiyay -
HomeciyaarahaAntonio Conte Oo Markii Labaad Maxkamad La Koraya Chelsea Inkastoo 9 Milyan Oo Magadhow Ah La Siiyay
August 22, 2019 F.G ciyaaraha 0
Tababarihii hore ee Chelsea Antonio Conte ayaa talaabo kale oo dhanka sharciga ah ka qaaday kooxda inkastoo 9 milyan ginni oo magdhow ah la siiyay sida ay sheegayaan wararka.
Wargeyska The Times ayaa sheegay in dagaalka qaraar ee u dhaxeeya tababaraha Talyaaniga Conte oo haatan tababare ka ah Inter Milan iyo kooxda Chelsea inuu weli sii socda 13 bilood ka dib markii uu ka tagay kooxda.
Waxaa la sheegay in Conte oo 50 sanno jir ah oo qareen isaga matalaya oo lagu magacaabo Phil Bonner inuu ka qeyb galay hordhaca dhageysiga dacwada uu u gudbiyay Maxkamad Shaqaaleedka Bartamaha London Jimcihii la soo dhaafay.
Waxaa la rumeysan yahay inuu dacwad ka dhan ah Chelsea u gudbiyay Maxkamad Shaqaaleedka iyadoo go’aanka maxkamada uu soo bixi doono bisha soo socota.
Faahfaahinta dacwada labaad ee Conte ee ka gudbinayo Chelsea ma cada laakiin waxaa la sheegayaa in kiisaska maxkamadaan loo gudbiyo inay inta badan la xiriiraan eedeymo ah in si aan cadaalad aheyn shaqada looga ceyriyay ama in la takooray.
Bishii April guddi ka kooban seddex xubnood ayaa Chelsea ku amray inay Conte siiyaan mushaharka hal sanno oo sagaal milyan ginni ahaa madaama ay ku heshiin waayeen lacagta madhowga madaama shaqada laga ceyriyay.
Natiijada ka soo baxda dacwada labaad ee Maxkamada Shaqada waxaa loo bandhigi doonaa dadweynaha.
Ilo dhanka sharciga ah oo la hadlay jariirada The Times ayaa sheegay Conte uu doonayo inuu ceebeeyo Chelsea carro uu u qabo darteed ama inuu doonayo in lacag magdhow fiican ah in la siiyo.
Waxa qofka sharci yaqaanka ah uu hadalkiisa raaciyay in kiiskaan labaad ee la xiriira in aan cadaalad aheyn shaqada looga ceyriyay inay keeni karto ugu badnaan in Chelsea lagu xukumo inay bixiso 60 kun ginni, taasoo ka dhigeysa in Conte uusan ujeedkiisa aheyn lacag balse ay uu leeyahay dan kale.